2.8 tapitrisa ny dia amin'ny zotram-piaramanidina amerikana isan'andro
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » 2.8 tapitrisa ny dia amin'ny zotram-piaramanidina amerikana isan'andro
Airlines for America (A4A), nanambara androany fa manantena mpandeha 257.4 tapitrisa - salan'isa 2.8 tapitrisa isan'andro - handeha amin'ny zotram-piaramanidina amerikana eo anelanelan'ny 1 Jona sy 31 Aogositra 2019. Io isa io dia tafakatra 3.4 isan-jato raha mitahiry mpandeha 248.8 tapitrisa tamin'ny fahavaratra lasa teo. Manampy seza 111,000 isan'andro ny seranam-piaramanidina handraisana ireo mpandeha 93,000 10 isan'andro antenaina mandritra ny vanim-potoana fitsangatsanganana fahavaratra. Ity no XNUMXth fahavaratra misesy mahita ny fitomboan'ny isan'ny mpandeha fiaramanidina amerikana.
“Miaraka amin'ny zotram-piaramanidina manolotra saran-dàlana ambany ary mampiditra vola amina miliara dolara amin'ny vokatra, tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa nanidinana. Amin'ity fahavaratra ity dia andrasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikanina ny fisian'ireo mpandeha ho any amin'ny habakabaka, ”hoy ny filoha lefitra A4A sady Lehiben'ny ekonomia. John Heimlich. “Ny fitsangatsanganana an-habakabaka no endrika fitaterana azo antoka indrindra eto amin'ny firenena, ary mora vidy kokoa noho ny teo aloha izy izao. Manamora kokoa ny fidiran'ny sidina an'habakabaka ny mpitatitra amerikana, koa tsy mahagaga raha mihamaro ny Amerikanina manidina. ”
Ny vidin'ny fiakaran'ny vidim-piainana dia nidina nandritra ny taona fahefatra nifanesy tamin'ny 2018, ary nihena hatrany ny salan-karaman'ny antonony $350, ao anatin'izany ny saram-panjakana sy haba aloa. Nidina 15.9% io vidin'ny tapakila io nanomboka tamin'ny 2014 ary, raha ny filazan'ny Bureau of Statistics, io no vidiny ambany indrindra narafitry ny fiakaran'ny vidim-piainana hatramin'ny nanombohan'ny masoivoho nanangona firaketana toy izany tamin'ny 1995.
Manohitra ny fitsangatsanganan'ny hetra amin'ny seranam-piaramanidina
Rehefa mitohy ny fidinan'ny vidim-piainana, misy seranam-piaramanidina sasany manery ny hampiakarana hetra amin'ny mpandeha rehetra. Efa ampiana 20 isan-jato na mihoatra ny vidin'ny sidina ny hetra, saingy maro ny seranam-piaramanidina sy ny hafa mangataka amin'ny Kongresy mba hitombo avo roa heny - na hampiakatra avo kokoa aza - ny Passenger Facility Charge (PFC), ny hetra amin'ny seranam-piaramanidin'ny mpandeha isaky ny mividy tapakila izy ireo .
Ny vola miditra amin'ny seranam-piaramanidina isan-taona dia nahatratra ny avo indrindra amin'ny $ 30 lavitrisa, miaraka amin'ny mpanjifa mandoa $ 6.9 lavitrisa isan-taona amin'ny hetra amin'ny seranam-piaramanidina, ao anatin'izany ny rakitra $ 3.5 lavitrisa amin'ny PFC amin'ny taona 2018. Ankoatr'izay, mipetraka ny seranam-piaramanidina amerikana $ 14.5 lavitrisa vola an-tanana, ary misy a $ 7 lavitrisa ambim-bola ao amin'ny Tahirim-bolan'ny Airport and Airway Trust.
"Be vola ny seranam-piaramanidina," hoy ny filoha lefitra zokiolona A4A momba ny politika mpanao lalàna sy ny lalàna mifehy Sharon Pinkerton. “Mitatitra vola miditra izy ireo ary mirongatra ny fananganana seranam-piaramanidina. Ny mpandeha dia tsy maniry ny fitsangatsanganan'ny hetra ary ny seranam-piaramanidina tsy mila izany. ”
Raha avo roa heny ny PFC dia tsy maintsy mandoa vola fanampiny ny fianakaviana misy olona efatra $72 - na $144 total - ho an'ny sidina an-dalambe, sidina tokana fijanonana.
Ny Airlines dia manohana famatsiam-bola fanampiny ho an'ny asa fadin-tseranana sy fiarovana ny sisintany
Tamin'ny alin'ny vanim-potoana fitsangatsanganana fahavaratra dia nanomboka nanodina ny mpiasan'ny ladoany sy ny fiarovana ny sisin-tany (CBPO) avy amin'ny seranam-piaramanidina amerikana hatrany amin'ny sisintany atsimo ny governemanta. Raha avela hitohy izany dia hiteraka tsipika be loatra izany ary hiandry ny fotoana hidiran'ny mpandeha sy ny entana avy any ivelany ny firenena. Izany dia hanakivy ny fitsangatsanganana sy ny dia ataon'ny orinasa any Etazonia ary hanohintohina ny tombontsoa ara-toekarena miaraka aminy. Ny A4A dia miantso ny fitantanan-draharaha sy ny kaongresy mba hiara-hiasa hamaha ny olana ara-piarovana amin'ny sisintany atsimo amin'ny fomba izay tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny fitaterana an'habakabaka amin'ny fotoana ilàn'ny rafitra miasa amin'ny fahombiazana farany.
Ny A4A dia nanatevin-daharana fikambanan'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dimy hafa ao amin'ny taratasy iray ho an'ny mpitarika ny loholona izay manentana azy ireo hanohana ny fangatahan'ny Fitondrana vola fanampiana fanampiny, izay misy famatsiam-bola ho an'ny mpiasan'ny CBP sy ny ora fanampiny, ao anatin'izany ny fiasa amin'ny seranam-piaramanidin'ny firenentsika.
Ireo mpitsangatsangana dia nangataka ny hahazo fahazoan-dàlana amin'ny mpamily ID REAL amin'ny fe-potoana farany
Fiandohana Oktobra 1, 2020, ny mpandeha dia tsy maintsy mampiseho fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny ID REAL na endrika famantarana mari-pahaizana ekena, toy ny pasipaoro amerikana manan-kery, ao amin'ny fizahana fitiliana ny Security Security Administration (TSA). A4A dia manentana ny mpandeha mba hanara-maso amin'ny masoivohon'ny mpamily fahazoan-dàlana hamantatra bebe kokoa sy hahazoana fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ny ID REAL alohan'ny fe-potoana.
Isan-taona, ny fiaramanidina ara-barotra dia manampy amin'ny familiana $ 1.5 tapitrisa tapitrisa amin'ny asa ara-toekarena amerikanina ary asa mihoatra ny 10 tapitrisa amerikana. Manidina mpandeha 2.4 tapitrisa sy entana maherin'ny 58,000 taonina isan'andro ny sidina amerikana. Airlines for America (A4A) dia miaro ny asan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka amerikanina ho maodely fiarovana, serivisy ho an'ny mpanjifa ary andraikitra amin'ny tontolo iainana ary tambajotra tena ilaina izay mitarika ny toekarem-pirenentsika sy ny fifaninanana manerantany.
Ny A4A dia miasa miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, asa, kaongresy, fitantanan-draharaha ary vondrona hafa hanatsarana ny sidina ho an'ny besinimaro mandeha sy mandefa.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasam-piaramanidina, zahao ny tranokalanay airlines.org sy ny bilaoginay, A Better Flight Plan, ao amin'ny airlines.org/blog.
Araho izahay ao amin'ny Twitter: @airlinesdotorg.
Toa anay ao amin'ny Facebook: facebook.com/AirlinesforAmerica.
Miaraha aminay amin'ny Instagram: instagram.com/AirlinesforAmerica.
Raha mila tsipiriany momba ny zava-bitan'ny zotram-piaramanidina amerikana sy ny angon-drakitra ara-bola ho an'ny telovolana voalohany 2019, azafady mba jereo ny fampahafantarana.
SOURCE Airlines ho an'i Amerika